Guddiga Dastuurka Baarlamaanka Soomaaliya oo ka shaqeynaya in dadka la baro Dastuurka Qaranka – Kalfadhi
December 2, 2018 Kalfadhi
Guddiga Dib-u-eegista Dastuurka Soomaaliya ayaa sheegay iney qorsheynayaan iney dadka baraan Dastuurka Soomaaliya, si ay ugu dambeyntii ugu codeeyaan sanadka soo socda ee 2019-ka. Waxa uu sheegay iney taasi dhici doonto marka ay ku dhameeyaan dib u eegista ay ku wadaan, kuna wareejiyaan Baarlamaanka, kaas oo cod u qaadi doonaa isla sanadka 2019-ka.
“In dadweynaha la baro (Dastuurka) hadda wey bilaabatay qorshayaasheeda” ayuu yiri Xoghayaha Guddiga Dib-u-eegista Dastuurka Baarlamaanka Soomaaliya, Senatar Xuseen Sh. Maxamuud. Laakiin, waxa uu Senatarku sheegay iney hadda juhdiga ugu weyn gelinayaan sidii ay kusoo dhameyn lahaayeen dib u eegista 5-ta cutub ee uga dhiman ka shaqeynta Dastuurka Ku-Meel-Gaarka ah (10 cutub ayaa horay looga shaqeeyey).
Waxa uu sheegay, sida uu qorshahoodu yahay, inuu Baarlamaanka Soomaaliya meel-mariyo Dstuurka ay ka shaqeynayaan ugu dambeyn bartamaha sanadka soo socda. “Anaga waxaan ku talagalnay in bartamaha 2019-ka uu Dastuurka Baarlamaanka wada ansixiyo” ayuu yiri Xuseen Sh. Maxamuud. Hase ahaatee, Senatarku meesha kama saarin inuu dib u dhac imaan karo, taasoo dib u sii ridi karta inuu Dastuurku helo “Afti Dadweyne” 2019-ka.
Xoghayaha Guddiga Dib-u-eegista Dastuurka, Senatar Xuseen Sh. Maxamuud, waxa uu sheegay iney haddaba u diyaar garoobeen iney la tashiyo la sameeyaan dadka qeyb kasta oo ay leeyihiin, si 2-da Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya ay ugu geeyaan Dastuur ay si fiican dib ugu eegeen. Hase ahaatee, waxa uu walaac ka muujiyey in qilaafyada siyaasadeed ee dalka ka jira ay ragaadin karaan shaqada ku socota Dastuurka Ku-Meel-Gaarka ah ee Soomaaliya.
Wasiirka Cadaaladda oo beeniyey iney Wasaaraddu dhiseyso Guddiga Ladagaalanka Musuqa